Bogga ugu weyn 17 Shaqooyinka Dhinacyada Kalkaaliyeyaasha Si Fiican U Bixiya 2022
Kalkaaliyeyaasha ayaa udub dhexaad u ah daawada. Waa marinka u dhexeeya fayoobaanta iyo ladnaanta. Waa safka hore ee daawada. Ma jiro qof arkay kalkaaliyaal oo hawlahooda qabanaya oo u malaynaya in shaqooyinkoodu yihiin kuwo aan muhiim ahayn ama mid lagu ciyaarayo. Taasi waxay keenaysaa su'aasha ah sababta ay u jiraan shaqooyin dhinaca kalkaaliyayaasha ah.
Virginia Henderson, oo ah hormuudka daawada ayaa yiri: “Shaqada gaarka ah ee kalkaalisadu waa inay ka caawiso qofka, buka ama si fiican, fulinta hawlahaas oo wax ka taraya caafimaadka ama soo kabashadiisa (ama geerida nabdoon) ee uu qaban lahaa haddii aan xoogga, doonista ama aqoonta. ”
Iyadoo hormuud u ah, Virginia Henderson waxay caafimaadka ku qeexday inuu yahay kartida qofku u leeyahay inuu si madaxbannaan u qabto hawlaha. Tani waxay sidoo kale la xiriirtaa aragtideeda ku saabsan '' 14 Baahiyaha Aadanaha Aasaasiga ah '' halkaas oo ay si adag u sheegtay inay tahay inaan xoogga saarno ka hortagga cudurrada iyo kor u qaadista caafimaadka macmiilka.
Helitaanka caafimaad wanaagsan waa caqabad. Sababtu waa iyada oo ay jiraan arrimo badan oo naga hortaagan in aan gaarno, kuwani waa da'da, asalka dhaqanka, qaab nololeedka, jinsiga, dheelitirka shucuurta, iwm.
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa kalkaaliyayaasha iyo shaqooyinka dhinaca kalkaaliyayaasha oo si fiican u bixiya.
Kalkaaliyeyaasha ayaa mas'uul ka ah inay qiimeeyaan bukaanka saacaddii, labadii, afartii, lixdii, ama siddeedii saacadoodba, taasoo ku xidhan qaybta aad ka shaqeyso iyo siyaasaddaada. Tan waxa ku jira qiimayn dhamaystiran oo madax-ilaa-lugo ah oo ay ku jiraan heerka neerfaha, sambabada, wadnaha, iyo dhawaaqa mindhicirka.
Biyo-mareen kasta, tuubooyin, IV-yada, kateetarka, boogaha, jeexjeexyada, arrimaha maqaarka aan caadiga ahayn, jawaabta neerfaha, xanuunka, qaadashada iyo soo saarista, calaamadaha muhiimka ah, iyo guud ahaan fayoobaanta.
Tallaabada xigta waa in la sameeyo waxqabad kasta oo aan u baahan karno sida beddelidda dhar -xidhka, faaruqinta biyo -mareenka buuxa, foley, maydhashada bukaanka ama daryeel shakhsiyeed, ka caawinta cuntada, baahiyaha musqusha, maamulidda dawooyinka, iyo dib -u -eegista qorshaha daryeelka bukaanka iyaga iyo qoyskooda, haddii ay joogaan.
Dhibaatada haysata samaynta dhammaan shaqadan codka fiican leh ayaa ah in mushaharku inta badan uusan ku filnayn. Taasi waa sababta ay wax badani u khaldameen, kalkaaliyayaasha caafimaadkuna waxay bannaanka u raadinayaan wax kasta oo wax badan hagaajin kara.
Xaqiiqooyinka ku saabsan kalkaalisada
#1 - Kalkaaliyeyaashu waxay noqon karaan dhakhaatiir
Kalkaaliyayaashu waxay dhakhaatiir noqdaan markay kalkaaliyayaashu helaan Dhakhtar Falsafadda ee Kalkaalisada (Ph.D.), oo ah dhakhtar diiradda saaraya cilmi-baarista, ama Dhakhtar ku-Dhaqanka Kalkaalisada (DNP) oo ah heerka ugu sarreeya ee laga heli karo kalkaalinta.
#2-Kalkaaliyayaasha caafimaadku waxay socdaan celcelis ahaan 4 illaa 5 mayl saacadaha 12-ka saac ah
A daraasad dhowaan Waxay ogaadeen in kalkaaliyayaashu ay ku socdaan 4 ilaa 5 mayl muddo 12 saacadood ah. Marka la barbardhigo, celceliska dadka qaangaarka ah ee Maraykanku waxay socdaan 2.5 ilaa 3 mayl in ka badan 18 saacadood.
Socodka joogtada ah iyo culeysyada kale ee shaqada ee kalkaaliyayaasha da'da weyn waxay u horseedi karaan daal, xanuun kalagoysyo, iyo dhaawacyo kale. Jawaabaha waxay soo jeedinayaan in socodka laga yaabo inuu khatar ku yahay kalkaaliyayaasha ka shaqeeya cisbitaalada daryeelka degdega ah.
#3 - Kalkaaliyayaasha caafimaadku dhammaantood kuma shaqeeyaan isbitaallada
Halka qiyaastii 60 boqolkiiba kalkaaliyayaasha caafimaadku ay ka shaqeeyaan isbitaalada, kuwa kale waxay ka shaqeeyaan adeegyada daryeelka caafimaadka bukaan -socodka sida xafiisyada dhakhtarka iyo xarumaha daryeelka bukaan -socodka, iyo guryaha kalkaalinta iyo bulshooyinka daryeelka degaanka, hay'adaha dawladda, iyo adeegyada waxbarashada.
#4 - Dugsiga kalkaalinta ugu horreeya waxaa laga aasaasay Hindiya 250 BC
Inta lagu jiro wakhtigan, ragga kaliya ayaa loo oggolaaday inay aadaan dugsiga sababtoo ah waxaa loo arkay inay ka daahirsan yihiin dumarka. Hadda, haweenku waxay si dhab ah u maamulaan goobta xisaab ahaan.
Xog laga helay Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Mareykanka 2009 ayaa sheegtay in ku dhawaad ​​5.8% kalkaaliyaasha Mareykanka ay ahaayeen rag. Ma ahayn ilaa 1800-meeyadii in kalkaalisada ay noqotay dhaqan habaysan.
XIDHIIDHKA: Sida lacag loo sameeyo sida ilmo 2022 | 5-17 sano
#5 - Kalkaaliyaasha caafimaadku waa mid ka mid ah xirfadlayaasha aadka loogu kalsoon yahay
Sannado badan, sahannada ayaa sii waday in kalkaaliyeyaasha lagu meeleeyo xirfadlayaasha ugu kalsoonida badan. Sahanka Gallup ee sannadlaha ah ayaa markii 14-aad u magacaabay kalkaalisada xirfadda ugu kalsoonida badan. In ka badan 85% dadweynaha ayaa kalkaaliyayaasha u arka kuwo daacad ah oo anshax leh.
Maxay kalkaaliyayaashu ugu baahan yihiin shaqooyin dhinac ah? Xaqiiqooyin qabow!
Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha ee Mareykanka, aragtida shaqada ee kalkaalisada ayaa ah mid rajo leh. Shaqaalaha kalkaalinta ee diiwaangashan ayaa la saadaalinayaa inay koraan ilaa 3.2 milyan marka la gaaro 2022 iyo wixii ka dambeeya.
Iyadoo saadaashani ay sii wadaan inay arkaan koritaanka, taas oo muujinaysa meelo badan oo kalkaaliyayaal ah iyo tartan soo socda, weli ma turjumayso in ay si fiican u bixiso kalkaaliyeyaasha.
Kalkaaliyayaal badan ayaa mushaar yar qaata, tanina ma aha kaftan. Waa dhab. The Xafiiska Tirakoobka Shaqada ayaa sheegay in celceliska mushaharka kalkaaliyayaasha caafimaadku yahay $35.24 saacaddii, taas oo u dhiganta $73,300 sannadkii.
Dadka sida aadka ah ugu dadaala sidii ay dadka uga soo celin lahaayeen qarka, mararka qaarna meelo ka baxsan, waxa ay helaan mushahar yar.
Wax badan ayaa laga sheegay qof kasta oo doorkiisa ka ciyaaraya si loo hubiyo in daryeelka caafimaadku u fiicnaado qof kasta. Qayb muhiim ah oo taas ka mid ah ayaa xaaladaha u wanaajinaysa kalkaaliyayaasha.
Maqnaanshaha taas, soo jeedin kale oo muhiim ah ayaa ah bixinta fursado qoto dheer sida shaqooyinka dhinaca kalkaaliyeyaasha oo si fiican u siiya si ay u kordhiyaan waxa ay sameeyaan si joogto ah.
Shahaadada sayidku ma caawisaa?
Way fiican tahay in la is weydiiyo, ugu yaraan sidaas ayaa la ii sheegay, waxaanan hubaa in adigana sidaas laguu sheegay. Taasi waxay tidhi, tani waa su'aal wanaagsan.
Waa mid rabta in la ogaado haddii nasiibka kalkaaliyayaashu ay qaataan jihada kor u kaca ka dib shahaadada mastarka ee kalkaalisada ama mid ka mid ah kunka doorasho ee jira.
Waxbarashada qalin -jabinta ayaa sidoo kale u oggolaanaysa kalkaaliyayaasha inay xoogga saaraan xirfadahooda meelaha sida gerontology ama dhakhtarka carruurta. Bar ama u gudub a maamul doorka, khabiiradu waxay yiraahdeen sidoo kale waxay la macno tahay awood mushahar sare leh.
Marka laga reebo raadinta aqoon dheeraad ah, waxaa jira faa'iido dhaqaale oo la socota horumarinta waxbarashada.
Shaqooyinka u baahan shahaadada mastarka si kor loogu qaado inta badan waxay la socotaa bakhti ku jira xirmada mushaharka.
Caadi ahaan, shahaadada mastarka ee laan kasta oo kalkaalisada ayaa u horseedi doonta koror ku saabsan $20,000 ama ka badan xirmada mushaharka.
Qaadashada shahaadada mastarka waxay u egtahay fikrad cajiib ah, waa maalgashi qaali ah waana mid aan lagu degdegin.
Iyaga oo aan helin shahaadada mastarka, kalkaalisooyinka haysta shahaadada koowaad ee jaamacadda wali waxay helayaan shaqooyin waxayna ku nool yihiin raaxo. Markaa xisaabi kharashka!
17 shaqooyin oo dhinaca kalkaaliyaasha ah oo si fiican u bixiya
#1 - Adeegga kaaliyaha Virtual
Kaaliyeyaasha dalwaddu waxay siiyaan taageero maamul macaamiisha macaamiisha xafiiskooda waxayna guud ahaan ka qaadaan $ 15-40 saacaddii. Haddii ay taasi u egtahay wax lagu qoslo oo madadaalo leh waxaad samayn kartaa dukaan adiga keligaa ah ama waxaad ku boodi kartaa shirkadda VA oo dhisan.
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska Bixinta Shaqooyinka Kaaliyaha Virtual ee Bilowga ah.
Qof kasta oo intarneedka isticmaalay wuu u markhaati furi karaa xaqiiqda ah in shaqadu ay u guurtay internetka iyo shaqo -bixiyeyaal badan oo u baahan kaaliyayaal waxay shaqaaleeyaan kaaliyeyaasha dalwaddu. Runtu waxay weli tahay in baahida loo qabo shaqooyinka kaaliyaha dalwaddii ee bilowga ah ay sii socon doonto.
#2 - Wareysiyada macaamiisha
Shirkado badan ayaa u baahan ra'yi-celin, waxayna badanaa ku helaan jawaab-celintan wareysiyada macaamiisha.
XIDHIIDHKA: Faallooyinka Dahabka ee Organo 2022: Faa'iidooyinka & Sida ay U Shaqeyso
Kalkaaliye ahaan, waxaad codsan kartaa inaad qayb ka noqoto mid ka mid ah barnaamijyada waraysiga macmiilka ah oo aad ka heli karto inaad macaamiisha ku wareysato khadka iyo taleefanka. Adeegani waxa uu si fiican u bixiyaa inta u dhaxaysa $50 ilaa $100 saacadii.
#3 - Ku iibinta Amazon
Shaqo dhinaca aad u fiican hadda waxay dib u iibin kartaa alaabta mid ka mid ah barnaamijyada Amazon. Barnaamijyadan ayaa u oggolaanaya dhinacyada saddexaad inay ku iibiyaan masarradooda iyagoo helaya heshiisyo maxalli ah isla markaana u diraya Amazon macaamiisha mar kasta.
#4 - Beeraha
Kalkaaliye ahaan, waxaad go'aansan kartaa inaad gasho beeraha. Waxaad ka bilaabi kartaa beer ku taal dhabarka gurigaaga oo aad isku daydo inaad beerato liinta, khudaarta, iyo digaagga la hayo.
Muddo ka dib, waxaad bilaabi kartaa inaad alaabtan ka iibiso macaamiisha oo aad lacag ka sameyso halkaas.
Beerashadu adiga kaliya ma faa'iido haddii aad bilowdo, sidoo kale waxay faa'iido u leedahay xubnaha qoyskaaga ee daawashada waxyaalahan koraan oo xitaa bilaabi kara kooda.
#5 - Waxbarid
Waxaad ku dhiiran kartaa inaad barato waxyaabaha aad aqoonta u leedahay. Haddii aad karti u leedahay inaad wax ka korto beerta ama beerta, waxay waxyaalahan ku bari karaan macaamiisha fasalka dhexdiisa lacag.
Halka marka hore, tani ay u muuqan karto mid yar, waxay u kori kartaa wax weyn. Dadka oo la baro sida ay wax u koraan ama wax u sameeyaan way caawisaa oo waxay ka dhigtaa inay ku wanagsanaadaan.
#6 - Qorista
Haddii aad leedahay karti qoraal ah oo hore loo aasaasay, waxaad ku qaadan kartaa darajo wax u qorida ganacsi ahaan, loogu talagalay dhagaystayaal badan iyo isticmaal dadweyne oo badan.
Ka dib markaad wax qorto, waxaad u guuri kartaa bilaabida buugaagta aad qorto. Waxaad ku bilaabi kartaa buugaagta elektaroonigga ah oo aad halkaas uga guuri kartaa. Kuwa wax qora inta badan, tani waxay u bilaaban kartaa waxqabad wakhti firaaqo ah oo ay halkaas ka qaabayso.
#7 - Qorista
Kalkaaliyeyaasha raadinaya dakhliyo dhinac ah waxay sameyn karaan dhaqaaq si ay u dejiyaan blog kaas oo ugu dambeyntii bilaabi kara inay kasbadaan lacag haddii ay sii wadaan oo ay helaan kuwa soo socda.
Waxaad dooran kartaa mawduuc kasta oo ku saabsan - door bidaan wax aad haysatid oo aad aqoon u leh. Si kale oo tani u noqon karto saamayn.
Tani waxay dhacdaa marka aad caan ku noqoto sabab qaar ka dibna lacag ka samayso caannimada.
#8 - Tababaraha caafimaadka
Aqoontaada dhakhtar ahaan iyo khabiir caafimaad waxaa loo isticmaali karaa in lagu tababaro oo lagu caawiyo dadka doonaya in ay helaan caafimaad iyo in ay ku noolaadaan nolol caafimaad qabta.
Waxaad si toos ah ula shaqeysaa macmiisha oo waxaad mid walba ku dalacaysaa saacad walba kulan kasta ama lacag ku salaysan rukunsad.
#9 - Marti gelinta Airbnb
Haddii aad leedahay sagxad hoose oo dhammaatay ama qayb gurigaaga ka mid ah oo aanu qofna isticmaalin, ka fiirso inaad ka kiraysato Airbnb.
Tani waxay ku kabi doontaa dakhligaaga wax yar oo dheeraad ah. Inkastoo lacagtu aysan noqon doonin mid la isku halayn karo, way fiican tahay inaad haysato lacagtaas yar ee dheeraadka ah.
#10 - Daryeelka hooyada
Waxaad u bixin kartaa adeegyada kaaliye daryeelka hooyada. Kalkaaliyaasha qaarkood waxay si toos ah ula shaqayn doonaan hooyooyinka cusub si ay uga caawiyaan inay bartaan sida guriga loogu naasnuujiyo iyo sida loo daryeelo dhallaankooda dhawaan dhashay.
Maadaama ay tani tahay wax aad hore u samaysay, waxaad si gaar ah uga dalaci kartaa adeeggan maadaama aad sidoo kale hubtid in ay jiraan dad u baahan caawimadaada.
#11 - Waqti -dhaafka
Waxaad go'aansan kartaa inaad shaqeyso saacadaha dheeraadka ah oo aad hesho lacag dheeraad ah saacadaha dheeraadka ah ee lagu daray. Iyadoo ay tani u egtahay fikrad wanaagsan, hubi inaad xaqiijiso inaad shaqayn karto saacadaha dheeraadka ah iyo in lagu siin doono lacag.
XIDHIIDHKA: Shuruudaha VIPKid: Yaa u Qalma inuu Codsado VIPKid 2022?
Haddii aad shaqayn karto saacadaha dheeraadka ah oo aad hesho mushahar, markaa waxaan kugula talinayaa inaad tixgeliso, maadaama ay kugu ilaalinayso inaad sameyso waxa aad jeceshahay oo aad lacag dheeraad ah geliso akoonkaaga.
#12 - Iibi farsamada gacanta
Haddii aad tahay nooca qofka wax ku sameeya isticmaalka gacmahaaga ama madaxaaga, markaa waxaad u sheegi kartaa iibsadayaasha doonaya lacag, ha ahaato khadka tooska ah ama adeegsiga qaybiyeyaasha dhinac saddexaad.
Iibinta farsamada gacanta waxay leedahay suurtogalnimo aad u weyn oo lagu guulaysan karo iyadoo tirada dadka qadarinaysa wax-ku-samaynta ay sii kordhayaan.
#13 - Caddaynta
Haddii aad tahay qof dulqaad u leh inuu wax akhriyo, markaa tani waxay noqon kartaa shaqo fiican adiga. Waxay u baahan tahay inaad u fiirsato faahfaahinta oo aad dulmarto qoraallada oo aad sameyso sixid lagama maarmaan ah.
Platforms sida Upwork waxay ku siinayaa fursad aad kula kulanto macaamiisha doonaya inaad u saxdo dukumentiyada oo aad u sameyso sixid sax ah,
#14 - Wadista baabuurka
Haddii aad xor tahay subaxo, habeeno, ama sabti iyo axad, waxaad heli kartaa lacag caddaan ah oo dheeri ah oo aad dadkaaga ku dhex wado.
Wadadu waxay u baahan tahay inaad haysato shati. Haddii ay jiraan shatiyo badan oo aad u baahan tahay si aad u awooddo inaad ku dhex wado baabuur-wadidda, markaa waa inaad heltaa ka hor intaadan gaadhin.
Waxaa jira goobo kuu ogolaanaya inaad tan sameyso iyada oo aan la taaban karin. tusaale Uber iyo Lyft.
#15 - Qurxinta gudaha
Qurxinta gudaha, qofku wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid xariif ah oo isha ku haya midabada. Guryo badan ayaa la dhisayaa, waxaa sii badan doona baahida qurxinta gudaha.
Haddii tani ay tahay shay aad samayn jirtay hiwaayad ahaan, waxa ay u badan tahay in aad aad uga fikirto oo aad sii weynaato.
#16 - Horumarinta App
Haddii aad leedahay xirfadda horumarinta app ee ugu yar, waxa si wanaagsan looga faa'iidaysan karaa adiga oo samaysa abka laftaada ama u samaynta kuwa kale oo diyaar u ah inay lacag ku siiyaan. Haddii aadan aqoon sida loo codeeyo, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in suuqu hadda kulul yahay oo haddii aad baran karto codeeynta apps-ka, waxaad yeelan doontaa xirfad aad ku isticmaali karto marar badan.
#17 - Muusikada
Waxa aad samayn kartaa xoogaa lacag ah adiga oo ku ciyaaraya muusiga meelaha ay dadku lacag ku siin karaan si aad ugu ciyaarto ama aad barato muusiga dadka diyaarka u ah inay lacag ku siiyaan.
Dabcan, tani waxay u qaadanaysaa inaad adigu aad ugu fiican tahay laftaada. Jacaylka muusigga, waxaad bilaabi kartaa shaqo waqti-dhiman ah oo carruurta baraysa sida loo ciyaaro.
#18 - Barta gunnada
Waxa kale oo aad bari kartaa yoga kuwa jecel waxbarashada; laakiin sida inta badan, tani waxay u baahan tahay inaad adigu leedahay xoogaa aqoon ah.
Waxaa jira kun iyo hal shay oo aad samayn karto si aad lacag badan jeebkaga ugu geliso kalkaaliye ahaan. Shaqooyinka dhinaca kalkaaliyayaasha ah kuma koobna tirada halkan ku qoran.
Kaliya eeg gudahaaga oo soo qaado shay u adeega bulshada si la mid ah sida kalkaaliyayaasha caafimaadku ugu adeegaan dhammaan kuwa ay la kulmaan. Is ogow hadda.
20 Shaqooyin Oo Lacag Badan Ku Heli Kara
13 Shaqooyin Online Degdeg ah oo Fudud oo Ardayda Kulliyadda ah
25 Shaqooyinka Ugu Walwalka Badan ee Bixiya $ 5,000 ama Ka Badan
Sida loo shubo Twitch | Hagaha Bilowga
15 Shaqooyin Qayb-Waqti Ah Oo Ay Leedahay Caymiska Caafimaadka 2022-ka
Immisa Ayuu Ku Kacaa Qareenka DUI?
Marka dadka lagu soo oogo DUI markii ugu horeysay, waxay guud ahaan ka walaacsan yihiin inay…
Intee le'eg ayay qaataan dagaalyahannada UFC? Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Ma la yaabtay inta ay le'eg tahay dagaalyahannada UFC? Maqaalkani wuxuu si weyn uga jawaabi doonaa arrintan. Dagaalkii ugu dambeeyay…